Property Benchmark Prices for Year 2018-2019 (Mandalay Region) – JVMyanmar
Posted on 30/07/2019 by JVM
Property Benchmark Prices for Year 2018-2019 (Mandalay Region)
Mandalay Benchmark Price Release for Year 2018-2019 and Summary Notes
Mandalay, the former royal capital, is the second largest city in Myanmar after commercial city, Yangon.
The real estate sector in Mandalay is also second most developed besides Yangon City due to its dense population and the city’s historical characteristics. The topography of Mandalay City is inarectangular shape, therefore, the roads are stretching from North to South and East to West shaping square plots of lands between the roads.
Mandalay is also different from Yangon in regard to land pricing term. Since the land plots in Mandalay are divided are in the formatted sizes such as (40*60 Ft, 60*80 ft , 60*120 ft and etc). The land prices in Mandalay are mentioned as price per land plot than the prices per square foot. In Mandalay Property Benchmark Price Report by IRD (Internal Revenue Department), all the land prices are originally described by acre measurement, however, in the report, we have change the pricing format into price per square foot basis to be consistent with the previous benchmark results. We have also learned that in Mandalay, the land price can generally be varied based on the width of the facing side, the shape and utilization of the land. After analyzing the benchmark data, we have learned that the overall land prices in Mandalay for the year 2019 has significantly dropped from 20% to 50% in comparison with last year’s data. The highest land prices can be found on 26th Street, 30th Street and 73th street of Chan Aye Tharzan Township with 234,160 MMK per square foot.
No fluctuation is found for the year 2017-2018 benchmark data and the year 2018-2019 benchmark data for Apartment prices in Mandalay. Apartment prices for Mandalay are categorized by floor difference from ground floor till 10th floor and the highest apartment price on main road is 50,440 MMK per square foot for ground floor and 14,477 at the lowest for the 10th floor on main road.
Land Benchmark Prices for Year 2018-2019 levied by Price Valuation Board (Mandalay Region)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ် မန္တလေးမြို့နယ်အတွက် ကာလတန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးမည့်မြေကွက်စံနှုန်းများ
မန္တလေးမြို့သည် ရှေးမင်းမျိုးမင်းနွယ်တို့၏မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့ပြီးလျှင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒုတိယအဖွံ့ဖြိုးဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ လူဦးရေထူထပ်ပြီး သမိုင်းဝင်အချက်အလက်များကြောင့် အိမ်ခြံမြေအပိုင်းတွင်လည်း ရန်ကုန်နှင့်မတိမ်းမယိမ်းအခြေအနေတွင်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။မြို့၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်သည်ထောင့်မှန်စတုဂံပုစံရှိသဖြင့်လမ်းများသည်မြောက်မှတောင်သို့်လည်းကောင်းအရှေ့မှအနောက်သို့တန်းမတ်စွာရှိနေပြီး ထိုလမ်းများ၏ကြားတွင်လေးထောင့်ကျကျမြေကွက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မန္တလေးမြို့၏ဈေးကွက်အသုံးအနှုန်းများသည် ရန်ကုန်နှင့် ကွာခြားပြီး မြေကွက်များကို (၄၀*၆၀ ပေ၊ ၆၀*၈၀ ပေ၊ ၆၀*၁၂၀ ပေစသည်ဖြင့်) သတ်မှတ်အကွက်ချထားသည်။ မြေဈေးများကိုလည်းတစ်ပေပတ်လည်အစား မြေကွက်တစ်ကွက် တန်ဖိုးဖြင့်သာ ဖော်ပြထားသည်။ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားသော မန္တလေးကာလတန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးသည့်မြေကွက်ဈေးနှုန်းများသည် ဧကအလိုက်ဖြင့် ဖော်ပြထားပြီး ယခု ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် တစ်ပေပတ်လည်နှုန်းဖြင့် ပြောင်းလဲဖော်ပြထားပါသည်။ မန္တလေးမြို့တွင် မြေကွက်မျက်နှာမူထားသော လမ်းမအကျယ်အဝန်း၊ မြေကွက်ပုံ နှင့် မြေကွက်အသုံးပြုမှုတို့ပေါ်မူတည်၍ ဈေးနှုန်းများ အပြောင်းအလဲရှိသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တွင် မြေကွက်တန်ဖိုးများ ယေဘုယျအားဖြင့်၂၀% မှ ၅၀%အထိ သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။ အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းများကို ချမ်းအေးသာဇံရှိ ၂၆လမ်း၊ လမ်း ၃၀ နှင့် ၇၃ လမ်း များတွင်တွေ့ရှိရပြီး စတုရန်းတစ်ပေလျှင် ၂၃၄၁၆၀ ကျပ်အထိရှိသည်။
တိုက်ခန်းဈေးများသည် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ထုတ်ပြန်ချက် နှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ထုတ်ပြန်ချက်အကြားပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။ တိုက်ခန်းဈေးနှုန်းများကို မြေညီထပ်မှ ၁၀ လွှာအထိသတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားပြီးအများဆုံးဈေးနှုန်းမှာ လမ်းမကြီးများတွင် တစ်ပေလျှင် မြေညီထပ် ၅၀၄၄၀ ကျပ် ရှိပြီး အနဲဆုံးဈေးမှာ ၁၀လွှာ ၁၄၄၇၇ ကျပ် ရှိပါသည်။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ကာလတန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးမည့် မြေကွက်စံနှုန်းများ (မန္တလေးမြို့)
Previous PostPrevious Property Benchmark Prices for Year 2018-2019 (Pyin Oo Lwin Township)
Next PostNext “What’s happening in Myanmar Market and Valuation, Vol_32”